गुगलको पहिलो पृष्ठमा पुग्ने रहस्य - Semalt सल्लाह
सबै एसईओ मिथ्याहरू तोड्नुहोस् र पहिलो पृष्ठमा सबै खोजी ईन्जिनहरूमा जानुहोस् तपाईको चाहानु भएसम्म धेरै कुञ्जी शब्दहरूको साथ!
मलाई थाहा छ तपाईं के चाहनुहुन्छ, सबैलाई के चाहिन्छ! गुगलको पहिलो पृष्ठमा जानुहोस् र नयाँ बजार र नयाँ ग्राहकहरूको पहुँच पाउनुहोस्। ग्राहकहरू तपाईंको व्यवसायको जीवनरक्त हुन्। यदि तपाईं तिनीहरूलाई सर्च ईन्जिनहरूमा निष्क्रिय तरिकामा फेला पार्न सक्नुहुनेछ, तपाईं आफ्नो व्यवसायको भविष्य र व्यवहार्यता निश्चित गर्नुहोस्।
अब SEO को बारेमा कटु सत्य बताउने समय हो। त्यहाँ एक गोप्य कुरा छ जुन सबैले बेवास्ता गर्दछन् जब यो तिनीहरूको वेबसाइट सुधार गर्ने आउँदछ। आज Semalt तपाइँलाई यो रहस्य प्रकट गर्दछ।
म तपाईको चिन्तालाई लामो पार्दिन। गुगलको पहिलो पृष्ठमा पाउनको लागि रहस्य के हो? तल पढ्नुहोस्
१० एसईओ घोटालाहरू तपाइँबाट अलग रहनु पर्छ
उच्च अपेक्षा र बच्चाको महत्वाकांक्षाहरू कायम राख्नु सामान्यतया व्यापार, लगानी, वा स्टोरको लागि गिरावटको शुरुआत हो।
तर समस्या गलत वेबसाइटहरुका लागि महत्वाकांक्षा होईन तर प्राविधिक ज्ञान र इन्टरनेटको वास्तविकताको अज्ञानता हो। शीर्ष खोजी इञ्जिनहरूमा स्तर निर्धारण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको धेरै बेवास्ता र कम महत्त्व पनि छ।
विश्वभरका हजारौं विज्ञहरू, विशेष गरी भारत, चीन, र बंगलादेश जस्ता विकासोन्मुख देशहरूका एसईओलाई मोटो शुल्कमा एसईओ गर्ने र यसलाई गुगलको पहिलो पृष्ठमा देखा पर्ने तर्कमा यस अज्ञानताको लागि माछा मार्न खोजिरहेका छन्।
किनकि तपाईं धेरै जनासँग समय र पैसा नहुन सक्छ SEO विशेषज्ञहरु आफै, Semalt तपाईंलाई तथाकथित SEO विशेषज्ञहरूको १० साधारण उदाहरणहरू दिन चाहन्छ जुन तपाईंले बेवास्ता गर्नुपर्छ।
धेरै प्रोफेशनल एसईओ स्क्यामरहरू यो वाक्यांशमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ कि यदि उनीहरूले तिर्ने पैसा तिर्दछ भने तिनीहरू हरेक महिना गुगलमा निश्चित परिणामहरू प्राप्त गर्दछन्। तर खोज ईन्जिनहरूमा जैविक नतिजाहरू सम्भव बनाउनु लगभग असम्भव छ।
गुगल आफैंले उत्तर दिईएको छ जसले सुनिश्चित नतिजा प्राप्त गर्ने दावी गर्दछ। कसैले पनि प्रमाणित गर्न सक्दैन कि तपाईं गुगलको शीर्षमा आउनुहुनेछ। यो पनि अगाडि जान्छ र यस्तो घटना रिपोर्ट गर्न प्रतिस्पर्धा आयोगको डाटा दिन्छ।
म गुगलमा कसैलाई चिन्छु
कुनै SEO कम्पनीको गुगलसँग कुनै विशेष सम्बन्ध छैन वा यसमा कुनै विशेष पहुँच छैन। गुगलका धेरै राम्रा-राम्रा कर्मचारीहरू, जसको न्यूनतम ज्याला $$,००० डलरमा एक बर्ष देखि शुरू हुन्छ, पहिले कत्ति धेरै सयौं युरो स्वीकार्न निकै गाह्रो छ।
नि: शुल्क एसईओ सेवा परीक्षणको लागि प्रस्ताव
SEO धेरै प्राविधिक र कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो छ। विदेशबाट धेरै कम्पनीहरूले एफटीपी पासवर्डहरू सोध्छन्, जसको एसईओसँग केहि गर्न दिंदैन, तपाईंलाई तिनीहरूको सेवाहरूको नि: शुल्क परीक्षण दिन।
त्यसोभए सामान्यतया, तपाइँसँग तपाइँको साइट ह्याक गरिएको छ र स्प्याम लिंकले भरिपूर्ण छ, र सबैभन्दा खराब तपाइँ कुनै साइटको साथ बाँकी हुनुहुन्छ!
हजारौं खोज ईन्जिनहरूमा बुझाउनुहोस्
सजिलो! यो मेरो हजुरआमा के गर्छ! तर गुगल ing%% इन्टरनेट खोज बजार को लागी लेखा संग, किन हजारौं खोज इन्जिनहरु लाई बुझाउन परेशान गर्नुहुन्छ?
यदि आज than भन्दा बढी वास्तविक खोज इञ्जिनहरू छन् भने, म Google, बिंग, Yandex, Baidu गणना गर्दछ। अरु खोज ईन्जिन छैनन्।
लुकेका र गोप्य SEO रणनीतिहरू
के कसैको SEO मा जादू छडी छ? कुनै वैध वा सेतो टोपी एसईओ कम्पनीको जादुई वा लुकेका क्षमताहरू हुन सक्दैनन्। जबसम्म उहाँ कालो टोपी एसईओसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ जुन गुगल द्वारा पछि सजाय पाउने डर छ।
Place 48 घण्टामा पहिलो स्थान
कुञ्जी शब्द प्रतिस्पर्धाको आधारमा अंशमा मान्य। तर तपाईले वेब डिजाइन जस्ता अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बजारमा देख्न सक्नुहुन्छ, गुगलको शीर्षमा पुग्न धेरै गाह्रो छ यदि तपाईंको साइटसँग उच्च डोमेन अधिकार छैन र कुञ्जी शब्दको सट्टा कुञ्जी शब्द वाक्यांश प्रयोग गर्दैन। सामान्यतया, कसैले पनि तपाईलाई गुगलको पहिलो पृष्ठमा hours in घण्टामा लिन सक्दैन जबसम्म तपाईंसँग वेबसाइट छ जुन गुगलमा राम्रो स्थितिमा छ।
सब भन्दा किफायती एसईओ
जब प्रस्ताव एकदम राम्रो लाग्दछ यो सत्य हो किनकी यो सत्य छैन। को SEO फलफूलको लागि सक्षम हुन समय र पैसा लिन्छ। यदि तपाईंसँग एसईओमा लगानी गर्न पैसा छैन भने, त्यसो भए आफैंले यो गर्न सिक्नु राम्रो हो कि केहि विवादास्पद महँगोको लागि न्यूनतम मूल्य खोज्ने प्रयास गर्नु भन्दा।
हामी गुगलका साझेदार हौं
सत्य यो हो कि गुगल पार्टनर मार्कले केवल कसैले वा कम्पनीले गुगल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तथ्यलाई मात्र जनाउँछ। अरु केही छैन! गुगलसँग एसईओ कम्पनी वा ईन्टरनेट डाइरेक्टरी छैन जस्तो यलो पेज जुन पार्टनर वा सम्बद्ध हो। जसले तिमीलाई भन्छ यो स्क्यामर हो।
हामी गुगलको रैंकिंग एल्गोरिथ्म जान्दछौं
यदि गुगलले यो खुलासा गरेको थियो भने, यसले तपाईंलाई एक क्षणको लागि खोजी परिणामहरूको मात्र ग्यारेन्टी गर्दछ। गुगलको खोज एल्गोरिदम गतिशील छ र दैनिक परिवर्तन हुन्छ। मात्र SEO विशेषज्ञहरु अनुमानहरूले एल्गोरिथ्म परिवर्तनहरू गर्न वा अनुमान गर्न सक्दछ। गुगलले २०० takes मा लिने २०० एसईओ कारकहरू यी मान्यताको आधारमा हुन्।
SEO को स्वामित्व प्राप्त सामग्री कम्पनीहरूबाट टाढा रहनुहोस्
धेरै एसईओ कम्पनीहरूले उनीहरूको प्रतिलिपि अधिकारको रूपमा चाँडै आफ्ना ग्राहकहरूको तर्फबाट सामग्री सिर्जना गर्दछ। यो केहि अनौंठो छ। तपाईले भुक्तान गर्नु भएको सबै तपाईको हो र तपाईंमा मात्र। अन्यथा, उही सामग्री प्रतिलिपि गर्न वा तपाइँको प्रतियोगीलाई बेच्न सकिन्छ।
तर हाम्रो विषय SEO को गोप्य थियो। तपाईं मलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि मैले अहिले सम्म भनेको सबै कुरा गुगलमा एक शीर्षमा बाहिर आउन गोप्यको साथ थोरै गर्नु हो। तर जान जारी राख्नुहोस्, तल पढ्नुहोस्।
गुगलको पहिलो पृष्ठमा जानको लागि गोप्य
गुगलको पहिलो पृष्ठमा पुग्न गोप्य कुरा, तर गुगल पनि एक हो र त्यस्तै रहनेछ, यसको एल्गोरिथ्ममा परिवर्तनको पर्वाह नगरी।
यो हार्ड काम बाहेक अरू केहि छैन!
यो लगभग निश्चित छ कि कडा परिश्रम सीधा गुगल खोजी परिणामहरूमा रैंकिंगसँग सम्बन्धित छ र एसईओ मा कडा परिश्रम भनेको तपाईंको वेबसाइटलाई प्रकाशमा ल्याउने र यसको सबै सामग्री खोजी ईन्जिनबाट पत्ता लगाउने एक मात्र तरिका हो!
कडा परिश्रमको बारेमा कुरा गर्दै, तपाईं धेरैले पहिले नै म र एसईओको साथ निराश हुन सक्नुहुन्छ र हुनसक्छ उनीहरूले जादू बटन, ट्रिक, वा गोप्य सफ्टवेयर जस्तो केही ग्लोसियरको अपेक्षा गरिरहेका थिए जुन म र गुगलले मात्र हाम्रो आफ्नै साइटहरूलाई मनपर्दछ।
दुर्भाग्यवस, मेरा साथीहरू, मैले Google मा कुनै वेबसाइट उच्च श्रेणीकरण गरेको र पैसा बनाउने कहिल्यै देखेको छैन जबसम्म यसले पहिले घण्टा खर्च गर्दछ सामग्री सिर्जना गर्दै र त्यस सामग्रीमा ब्याकलिks्कहरू। गुगलमा पहिलो पाउन तपाईंले कति सामग्री र कति ब्याकलिks्कहरू आवश्यक छ? मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन तर कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले सुरु गर्नु अघि सोचेको भन्दा धेरै।
SEO र १०,००० घण्टा नियम
असफलबाट सफललाई छुट्याउने एउटा अवरोध छ, र त्यो १०,०००-घण्टा अवरोध हो। यो एक कला वा व्यवसाय मा 10,000 घण्टा अभ्यास लिन्छ यसलाई सफल हुनको लागि! नियम यो हो कि तपाईंलाई कुनै पनि चीजमा सफल हुनको लागि १०,००० घण्टा अभ्यास आवश्यक पर्दछ।
त्यसो भए SEO मा सफल हुन तपाईलाई १०,००० घण्टा अभ्यास, प्रयोग, र परीक्षण चाहिन्छ। जनसंख्याको ठूलो प्रतिशतले के विश्वास गर्दछ त्यसको विपरीत, प्रतिभा एक्लो कारक हो जुन क्षेत्रको एक व्यक्तिको विकासको निर्धारण गर्दछ, Semalt ले सिद्धान्तको साथ सबै चीज उलट्यो।
शीर्ष सians्गीतकारहरू, चेस प्लेयरहरू, कलाकारहरू, व्यवसायीहरू, खेलाडीहरू, इत्यादिहरूको अध्ययन गरेपछि यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि यसले वास्तवमा कम्तिमा १००० घण्टा अभ्यास गर्न सक्दछ, कमसेकम १० बर्षको अवधिको लागि यसमा विशेषज्ञ वा नेता बन्नको लागि। ।
10,000 - 5,000 - 2,000 र 1,000 घण्टा को बाँध
आधारभूत प्रयोग तीन स्तरहरूमा संगीतकारहरूको स्तर निर्धारण गर्नु थियो:
यसले उनीहरूको संगीतको विकासमा बिताएको घण्टाको साथ सांख्यिकीय रूपमा महत्वपूर्ण सम्बन्ध प्रकट गर्दछ। त्यसोभए १०,००० - and,००० र २,००० घण्टाको सीमा कसैलाई असाधारण, राम्रो, वा औसत बन्नको सीमा थियो।
१,००० घण्टा शुरुआतको अवरोध पार गर्न र सफलताको आधारभूत सीपहरू विकास गर्न सक्षम हुनको लागि सीमा थियो। त्यसोभए एक पटक तपाईंले सही र गुणस्तरीय सामग्री सिर्जना गर्नुभयो जुन इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू र सम्भावित ग्राहकहरूले खोजी गरिरहेका छन्, तपाईंले पहिले गुगल गुणात्मक दृश्यता प्राप्त गर्न १,००० गुण ब्याकलिks्कहरू सिर्जना गर्नुपर्नेछ। तपाईंको स्थिति निश्चित गर्न अर्को चरण १०,००० गुणवत्ता ब्याकलिks्कहरू सिर्जना गर्नु हो।
१०,००० गुण ब्याकलिंक्सले तपाईंलाई गुगलको पहिलो पृष्ठबाट अलग गर्दछ
धेरै एसईओ विशेषज्ञहरु एक प्रतिस्पर्धी विश्लेषण गरेर शुरू, तपाइँको आफ्नै रैंकिंग मापन र शीर्ष १० कुञ्जी शब्दहरु को लागी तपाइँको प्रतिस्पर्धी 'मा। SEO मा यो दृष्टिकोण पुरानो, अपर्याप्त, छोटो दृष्टि, र गलत हो।
यसलाई मायोपिक एसईओ वा एसईओ मोयोपिया भनिन्छ किनभने यस प्रकारले तपाईले रूख प्राप्त गर्नुभयो जुन एउटा कुञ्जी शब्द हो र तपाईले जंगल हराउनुहुन्छ जुन सम्भावित ग्राहकहरूको सम्पूर्ण पोखरी हो जुन तपाइँको वेबसाइटमा प्रमुख वाक्यांशहरूको साथ आउँदछ। खोजशब्दहरू% ०% वा अधिक खोज ईन्जिनहरू वा आगन्तुकहरूबाट कुल कार्बनिक ट्राफिकको निर्माण गर्दछ जुन तपाईंको वेबसाइटमा पहिलो पटक प्रवेश गर्दछ।
के तपाई खोज इन्जिन वा १००० बाट एक दिन १०० जना पाहुना पाउन चाहानुहुन्छ?
यदि तपाईं एक हजार चाहानुहुन्छ भने तपाईंले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ वास्तविक SEO र SEO, कम्पनीहरु को खोज, रैंकिंग, र यस्तो paparazzi को जंक मा छैन।
वास्तविक SEO जैविक यातायातको वृद्धि र ग्राहकहरूको लागि आगन्तुकको प्रतिशत रूपान्तरण नापेर मात्र मापन गरिन्छ।
र किनभने वास्तविक एसईओ को धेरै कडा परिश्रमको आवश्यकता छ, त्यहाँ गर्ने धेरै कम मानिस छन् - जसमध्ये म मँ हुँ र ज्ञात- र यसको लागि तिर्नेहरू थोरै कम छन् - म तपाईं मध्ये एक हुँ भने खुशी हुन्छु।
दुर्भाग्यवस, आजको लागि हाम्रो समय सकियो, यो लेख अध्ययन गर्न समय लिनुभएकोमा धन्यवाद। मलाई आशा छ कि मैले तपाईंलाई एसईओ र खोजी ईन्जिनको गहिरा ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गरेको छु र म भविष्यमा सहयोगको लागि आतुर छु वेबसाइट पदोन्नति।
वेबसाइट पदोन्नतीको बारेमा कुरा गर्दै, हामी हेरौं कि कसरी Semalt तपाईंको व्यवसाय को लागी एक स्वचालित पदोन्नति प्लेटफार्म को प्रस्ताव।
तपाईंको व्यवसायको लागि स्वचालित प्रोमोशनल प्लेटफर्म
तपाईको व्यवसायका लागि तीन उत्तम एसईओ सेवाहरू खोज्नुहोस्:
छोटो सर्त भित्र ठूलो परिणाम; यो एसईओ प्याकेज अनलाइन व्यापारको लागि वास्तविक "पूर्ण घर" हो:
तपाईं अद्भुत वेबसाइटहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ, तर गुगल SERP को शीर्ष स्थानहरूमा तिनीहरूलाई कसरी ड्राइभ गर्ने भनेर थाहा छैन? यसको एसईओ अभियान सुरू गर्न $ ०.99! मात्र खर्च हुन्छ! यदि तपाईं खोजी ईन्जिन अप्टिमाइजेसनमा शुरुवातकर्ता हुनुहुन्छ भने पनि, अब तपाईंसँग अनलाइन वेबसाइट प्रमोट गर्न आवश्यक सबै कुरा छ। तपाईं आफ्नो प्रोजेक्टहरूको लागि सेतो टोपी एसईओ टेक्नीकहरूको यो सेट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, वा तपाईं हाम्रो अनौंठो प्रविधिमा आधारित एसईओ सेवाहरू प्रदान गरेर तपाईंको ग्राहकहरूलाई राम्रो ग्राहक अनुभव दिन सक्नुहुन्छ। AutoSEO लाई तपाईंको लागि कार्य गर्न दिनुहोस्! किफायती मूल्य, द्रुत परिणामहरू, १००% प्रभावकारिता
तपाईंको व्यवसायको लागि डिजाइन गरिएको उन्नत एसईओ प्रविधिहरू।
यो प्याकेज साधारण एसईओ सेवाहरू भन्दा धेरै राम्रो छ।
फोर्ब्स वर्ल्ड € ² सब भन्दा ठूला कम्पनीहरूको सूचीमा तपाईंको कम्पनीको कल्पना गर्नुहोस्! सफलताले तीन गोप्य सामग्रीहरू समावेश गर्दछ: बिक्री, नाफा, र साझेदारी। र पूर्ण एसईओ तपाइँलाई तपाइँको समृद्धिको लागि तिनीहरूलाई मिक्स गर्न मद्दत गर्दछ! हाम्रो पेशेवर एसईओ को टीम को खोज इंजन अप्टिमाइजेसन र वेब पदोन्नति को लागी एक व्यक्तिगत योजना को विकास र लागू गर्दछ, विशेष गरी तपाईको ब्यापारको अनुरूप। तपाईंको कर्पोरेट वेबसाइट गुगल कार्बनिक खोजमा पहिलो स्थान लिनेछ। व्यक्ति वेबमा विशेष उत्पादनहरू र सेवाहरू खोज्दै छन्, र हामी तिनीहरूलाई तपाईंको साइटमा ड्राइभ गर्नेछौं!
Google TOP10 मा छोटो तरीका प्रकट गर्दछ। प्रवृत्तिमा रहनको लागि Semalt कीवर्ड रैंकिंग परीक्षक र वेब विश्लेषक प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाइँको वेबसाइट रैंकिंग जाँच गर्नुहोस्
पृष्ठमा अनुकूलन गल्तीहरू पहिचान गर्नुहोस्
के तपाइँ शीर्षमा पुग्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, तर कुनै लाभको साथ छैन? ग्राहकहरु तपाइँको वेबसाइट पाउन सक्नुहुन्न? नि: शुल्क Semalt वेब एनालिटिक्स उपकरण प्रयोग गरेर परीक्षण, विश्लेषण र उत्तर फेला पार्नुहोस्। अनलाइन कीवर्ड रैंक परीक्षकले Google SERPs मा वेबसाइट स्थितिहरू देखाउँदछ र लक्षित प्रचारको लागि कुञ्जी सुझाव दिन्छ। व्यक्तिहरू के खोज्दैछन् भन्ने पत्ता लगाउनुहोस् र उनीहरूलाई के आवश्यक छ बताउनुहोस्। तपाइँका प्रतिद्वन्द्वीहरुको स्थितिहरुको निरीक्षण गर्नुहोस्, तिनीहरुको सफलताको रहस्य बताउनुहोस् र तपाइँको अनलाइन पदोन्नतिको लागि नयाँ ज्ञान प्रयोग गर्नुहोस्। निश्चित त्रुटिहरू र सुधारिएको क्रममा विस्तृत रिपोर्टहरू उत्पन्न गर्नुहोस् तिनीहरूलाई विश्लेषण गर्न तपाईंलाई कुनै पनि समयमा आवश्यक छ। वेब गुरु बन्नुहोस् र तपाईंको वेबसाइटले तपाईंलाई धनी बनाउन दिनुहोस्।